Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) - Hello Sayarwon
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်)
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Nitroprussid Sodium ကိုများသောအားဖြင့် နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းနှင့် သွေးတိုးရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။ ထို့ပြင် ခွဲစိတ်ကုသမှုများပြူလုပ်ရာတွင် သွေးပေါင်ကို အနိမ့်အနေအထားတွင် ထားရန် အသုံးပြုပါသည်။
Nitroprussid Sodium ကို ဖော်ပြပါများအပြင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Nitroprussid Sodium ကို ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် သွေးပြန်ကြောထဲသို့ ဆေးထိုးစက်နှင့် ထိုးသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲတွင် လုံလောက်သော Nitroprussid Sodium ဓါတ်များရရှိချိန်အထိ သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထိုသို့ဆေးသွင်းနေချိန် သင့်အသက်ရှုပုံ၊သွေးပေါင်ချိန်နှင့် သွေးထဲရှိအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်များကို စောင့်ကြည့်နေရန်လိုအပ်ပြီး
ဆီးစစ်ခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
Nitroprussid Sodium နှင့် ကုသရန် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း၊ နို့တိုက်နေခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန်အားကြိုပြောရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုဆေးကို အသုံးပြုဖူးပါကလည်း သင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးပါ။
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်ထားပြီး အခန်းအပူချိန် 20 ံC မှ 25 ံC (68 ံF မှ 77 ံF) အတွင်းသိမ်းဆည်းပါ။
ထို့နောက် Nitroprussid Sodiumဆေးကို အကြောဆေးရည်များဖြစ်သော D5W/ RL/ NS များတွင်ထည့်ဖျော်ပြီး အခန်းအပူချိန် 25 ံC တွင်ထားနိုင်ပြီး4ံC ရှိသော ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၂၄ နာရီကြာအောင်ထားနိုင်ပါသည်။
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Nitroprussid Sodium တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်သို့မဟုတ် မွေးရာပါ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ထဲတွင် သွေးခဲပိတ်ခြင်းများကြောင့် မျက်စိအမြင်အာရုံထိခိုက်ခြင်းများရှိပါက Nitroprussid Sodium ကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
အထူးသဖြင့် သင့်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ၊ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊အသည်းရောဂါ ၊သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ခြင်း ဦးခေါင်းကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဦးနှောက်အကြိတ်ဖြစ်ခြင်းများရှိလျှင် ဆေးမသုံးမီတွင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ပြင်အောက်ပါ ပြင်းထန်ဆိုးကျိုးများခံစားရပါက ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
အသက်ငင်ခြင်း။ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုမြန်နေခြင်း
စိတ်အာရုံ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နားထဲတွင် ဆူညံသံများကြားခြင်း
မူးစေခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ တက်ခြင်း
ခြေထောက် လက်တောက်များ အေးစက်လာခြင်း၊ ထုံလာခြင်း
ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Nitroprussid Sodium သည်မိခင်နို့ရည်ထဲတွင်ပါဝင်မှုရှိမရှိနှင့် ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိမရှိ မသိရသေးသောကြောင့် သင်သည်နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်ပါက Nitroprussid Sodium ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ မသောက်ရပါ။
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အစာအိမ် အနည်းငယ်အောင့်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း
အရေပြားတွင် ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ပြီး နီရဲလာခြင်း
အရေပြားတွင် မြင်နေရသော သွေးပြန်ကြောများစိမ်းနေရာမှ မဲနက်လာခြင်း
အကြောဆေးသွင်းထားသော သွေးကြောတဝိုက်တွင် နီရဲလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Nitroprussid Sodium က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
ဦးခေါင်းကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဦးနှောက်အကြိတ်ဖြစ်ခြင်းများရှိလျှင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သွေးတိုးနေသော လူကြီးများအတွက် အရေးပေါ်သုံးရမည့် ပမာဏမှာ
အကြောထိုးဆေးကို အဆက်မပြတ်သွင်းရမည့် ပမာဏ မှာ 0.3 mcg/kg/min IBW ဖြစ်ပြီး
ထို့နောက် အများဆုံး10 mcg/kg/min IBW အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်သော လူကြီးများအတွက် သုံးရမည့် ပမာဏမှာ
အကြောထိုးဆေးကို အဆက်မပြတ်သွင်းရမည့် ပမာဏ 10 to 15 mcg/min ဖြစ်ပြီး10 to 200 mcg/min
ထို့နောက် အများဆုံး 280 mcg/min (4 mcg/kg/min).
ကလေးတွေအတွက် Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်များအတွက် Nitroprussid Sodium
နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျစိတ်ချရသောဆေးပမာဏများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသာ Nitroprussid Sodiumကို အသုံးပြု သင့်ပါသည်။
Sodium Nitroprusside (နိုက်ထရိုပရပ်စဒ် ဆိုဒီယမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Nitroprussid Sodium ထိုးဆေးတစ်ဘူးလျှင် 2ml (25mg/ 2ml) နှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကို လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်ထိုးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲထိုးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Nitroprusside, https://www.drugs.com/mtm/nitroprusside.htmlAccessed November 10, 2016
Nitropress (sodium nitroprusside) - Drug Summary, http://www.pdr.net/drug-summary/Nitropress-sodium-nitroprusside-3404Accessed November 10, 2016